ရုတ်တရက်ကြီးဝမ်းနည်းအားငယ်လာတဲ့စိတ်ကို ဘယ်လိုကိုင်တွယ်ကြမလဲ? – Trend.com.mm
Posted on December 3, 2019 by Noel
ဘာမှထွေထွေထူးထူးမဟုတ်ပဲနဲ့ကို ရုတ်တရက်ကြီးဝမ်းနည်းသွားတာ၊အားငယ်သွားတာ၊ငိုမိသွားတာ၊စိတ်ဓာတ်ကျသွားတာ၊အားလုံးက အေးဆေးဖြစ်နေပါရက်နဲ့ စိတ်ထဲမှာ တစ်ယောက်တည်းပဲဖြစ်နေသလို၊တစ်ယောက်ယောက်နဲ့စကားပြောလိုက်ရရင်ကို အားရှိသွားသလို ခံစားနေရတာမျိုး တစ်ချို့သူတွေဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန် သူတို့နဲ့စကားပြောပေးတဲ့သူ၊သူတို့ကိုဂရုစိုက်ပေးတဲ့သူကို ပိုပြီးအားကိုးချစ်ခင်တွယ်တာတတ်ပါသေးတယ်။ဒါတွေထားလိုက်ပါတော့။ကျွန်တေ်ာတို့ရဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းလေးကို ဆက်လိုက်ရအောင်…
အဲ့ဒီလိုမျိုး ရုတ်တရက်ကြီးဝမ်းနည်းအားငယ်သွားတဲ့အချိန်ကြုံလာရင် ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ကျော်လွှားကြမလဲ?
ရုတ်တရက်ကြီးငိုချင်လာတယ်။ဘာမှလုပ်ချင်စိတ်မရှိတော့ဘူး။၀မ်းနည်းလာတယ်ဆိုရင် လုပ်လက်စအလုပ်တွေကိုခဏရပ်ပြီး ကိုယ်ကြိုက်တဲ့သီချင်းလေးတွေနားထောင်လိုက်တာ၊ကိုယ်သဘောကျတဲ့ရုပ်ရှင်ကားလေးကြည့်လိုက်တာမျိုးလုပ်ပါ။အဲ့ဒါက စိတ်အပြောင်းအလဲ
*အပြင်သွားပြီး မုန့်သွားဝယ်တာ၊ဟိုနားဒီနားထ လမ်းလျှောက်လိုက်တာမျိုးလုပ်ပါ
အပြင်သွားပြီး မုန့်သွားစားတာ၊မုန့်သွားဝယ်တာ၊လမ်းထလျှောက်တာမျိုးကလည်း ၀မ်းနည်းနေတဲ့စိတ်ကို အဆင်ပြေသွားစေပါတယ်။အလုပ်ထဲက တစ်ယောက်ယောက်နဲ့စကားလက်ဆုံပြောတာမျိုးကလည်း စိတ်အပြောင်းအလဲဖြစ်စေပါတယ်။
ဘာမှမလုပ်ချင်ဘူးဆိုပြီးထိုင်မနေပါနဲ့။အဲ့ဒါဆို ပိုတွေးမိပြီး ပိုအဆင်မပြေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။စိတ်ညစ်တယ်။စိတ်ရှုပ်လာတယ်ဆိုရင် ရေထချိုးလိုက်တာ၊လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာစသဖြင့် အိမ်ကိစ္စလေးတွေလုပ်လိုက်တာက သင့်စိတ်ကို အဆင်ပြေသွားစေပါလိမ့်မယ်။
ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူရဲ့အသံလောက် အားအင်ပြည့်တာရှိပါဦးမလား။ကိုယ်ချစ်တဲ့သူဆိုတာ ကိုယ့်မိသားစုလည်းဖြစ်သလို ကိုယ့်ရဲ့အရင်းနှီးဆုံးသူစိမ်းစသဖြင့်ပေါ့။ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူနဲ့ ခဏတစ်ဖြုတ်စကားပြောလိုက်တာကလည်း လေးလံနေတဲ့စိတ်တွေ၊အားငယ်နေတဲ့စိတ်တွေ ယူပစ်လိုက်သလို ပျောက်သွားစေပါတယ်။
အိမ်မှာလည်းအားနေတယ်ဆိုရင် ဖေ့ဘွတ်တို့၊ယူကျူ့ဘ်တို့က မိတ်ကပ်ဗီဒီယိုလေးတွေကြည့်၊ပြီးရင် ကိုယ်လည်းလိုက်ပြင်ကြည့်ပေါ့။အဲ့ဒါဆို ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ကပ်အစွမ်းတွေလည်းတိုးတက်လာမှာဖြစ်သလို မိတ်ကပ်ပြင်နေတဲ့အချိန်မှာလည်း ဒါကိုပဲအာရုံစိုက်နေတာဖြစ်လို့
မကြာခင်မင်္ဂလာပွဲကျင်းပတော့မယ့် မင်းသမီးချောလေး Jeon Hye Bin